Voafandrika ao Mariupol: Toy ny ahoana ny ao anatin’ny tanànan’i Okraina tratry ny fahirano · Global Voices teny Malagasy
Zeràn'ireo tafika Rosiana baomba isanandro ny tanàna atsimon'i Okraina
Voadika ny 22 Avrily 2022 2:33 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, 繁體中文, Español, Nederlands, Ελληνικά, Français, Română , українська, English
Tranobe fonenana iray ao Mariupol, ao atsimo-atsinanan'i Okraina, tratry ny tifitra vary raraka nataon'i Rosia. Pikantsary iray avy amin'ny lahatsary, SkyNews, 11 Martsa 2022.
Navoaka teo amin'ny OpenDemocracy tamin'ny 11 Martsa 2022 ity lahatsoratr‘i FR Valeria Costa-Kostritsky ity. Naverina navoaka indray ho ampahany amin'ny fiarahamiasa fifampizaràna votoaty ary navaozina mba hifanaraka amin'ny fomba GV.
Ahitana mponina 500 000 ny tananàn'i Mariupol, seranantsambo any Okraina. Baboin'ireo mpisintaka tohanan'i Rosia nandritra ny fotoana fohifohy io tanàna io tamin'ny taona 2014. Tamin'io taona io ihany, nalain'ny tafika Okraniana indray ny tanàna, saingy nanomboka teo nijanona ho tena akaikin'ny vava-ady misy an'ireo hery Okraniana sy ireo mpisintaka.
Ankehitriny, voatafika indray i Mariupol, taorian'ny fananiham-bohitra ao Okraina ataon'i Rosia, izay nanomboka tamin'ny 24 Febroary 2022. Ny fakàna an'i Mariupol dia manome làlana an'i Rosia hamorona lalantsara eo anelanelan'ireo faritra fehezin'ireo mpisintaka mpomba an'i Rosia any atsinanan'i Okraina sy i Krimea nozanahany, miantoka ny fidirana ao amin'ny ranomasin'i Azov. Miaina fahirano ny tanàna ankehitriny, tratry ny fandrika ireo mponina ao. Olona maherin'ny 1 200 no heverina fa maty.
“Mbola mangatsiaka be tsy laitra any ivelany sy ato an-trano”, hoy ilay psikôlôgy, Angela Timchenko, avy ao Mariupol nanoratra teo amin'ny pejy Facebook-ny tamin'ny 10 Martsa. “Sakafo kely sisa no ato aminay. Ahenan'ireo olon-dehibe ny sakafo haniny. Omaly, mba ahazoana paty fanosotra amin'ny mofo (izay tsy anananay) sy vatomamy, ora enina no nilahatra sakafo ny iray taminay tao amin'ny fivarotana farany izay miasa.”
Ny andro manaraka, nanampy izy hoe :
Manana fanontaniana aho, ary tsy mandrabiraby aho eto. Inona no [ilàna] hiarovana an'i Mariupol… raha toa ny tanàna aza feno faty, raha toa ireo olona maty, na vokatry ny fipoahana na noho ny hanoanana, na nalevina tao ambanin'ireo faharavàna ? Tany kely mirodana ve no lafo vidy kokoa noho ny ain'ireo olona, noho ny ho avin'ireo zanatsika?
Petro Andriushchenko, mpikambana iray ao amin'ny filankevitry ny tanàna, no nanoratra fa “andro fito nanaovana fahirano tanteraka ny tanàna ry faharavàn'ireo fotodrafitrasa ao aminy no niaretan'ireo olom-pirenena . Midika izany fa tsy misy jiro ny tanàna, tsy misy fanafanàna, rano fisotro sy entona. Nandritra ny sivy andro, niharan'ny tifitra mahery vaika tsy ankiato ny tanàna, tifitra ary ireo zera baomba an'habakabaka.”
Monina ao amin'ny vohitra kelin'i Berdians’ke, any amin'ny sisintany atsinanan'i Mariupol, i Olha Yatchuk, mpampianatra eny amin'ny Anjerimanontolo. Ny 1 Martsa, nanandrana nandositra tamin'ny fiara izy sy ny fianakaviany, taorian'ny fanjeràna baomba ny tanànan-dry zareo, ary tody soa tao Mariupol, izay nilaozany haingana ho any avaratra.
“Tsy nisy olona mihitsy teny an'arabe,” hoy izy. “Nazava taminay fa voahodidina amin'ny lafiny rehetra ny tanàna ary hiaina tifitra. Niteny taminay ireo miaramila Okraniana fa mety ho zava-doza ny fandehanana mivoaka. Mbola nataonay ihany izany, singy mety izahay angamba no farany afaka handeha. Nisy zera baomba, fipoahana. Raha nandeha izahay, hitanay ireo miaramila mirongo fiadiana mahery vaika mivondrona manodidina ny tanàna.”
Ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa dia midika fa ny ankamaroan'ireo mponina dia tsy manana fifandraisana an-tariby na amin'ny aterineto, ka noho izany tsy misy ahafahana mampilaza amin'ireo havany any ivelan'ny tanàna fa velona izy ireo. Manara-maso ny fantsona Telegram iray mizara ny sarin'ireo trano voadona sy ny anaran'ireo olona mbola velona, ireo havana any ivelan'ny tanàna. Mamoaka tsy tapaka ihany koa ireo vaovao farany mikasika ny zava-mitranga ao an-tanàna ny rezimenta Azov, andiana mpitandro filaminana ivelan'ny tafika noforonin'ireo vondrona roa neo-nazis, sady tafiditra ankehitriny ao anatin'ny tafi-piarovam-pirenena ao Okraina.
Sashko Protyah, mpamokatra sarimihetsika, avy any Mariupol saingy ao Zaporizhzhia ankehitriny, no afaka niresaka tamin'ny namana iray tao an-tanàna tamin'ny 10 Martsa.
“Faritra iray sisa no misy fifandraisana”, hoy izy tamin'i openDemocracy.
Tsy maintsy mandeha any ianao, mamakivaky fotaka – tsy misy fitaterana, mazava ho azy – mitety ny tanàna izay tena voadaroka baomba tsy tapaka. Eo akaikin'ny Kianjan'ny Fahafahana izany. Nandritra ny fifampiresahanay, nandre fipoahana aho. Tena reraka ireo olona ao Mariupol. Nilaza izy fa mahafantatra trano fonenana maromaro izay eo an-tokontany no alevin'ny olona izay niharam-boina.
Ny ampahany andrefana amin'ny tanàna no rava voalohany. Omaly [9 Martsa], trano fiterahana iray no voadaroka baomba, sy ny tsena teo afovoany koa. Darohan'izy ireo tsy misy fanavahana ny faritra misy ny tanàna. Tao anatin'ny andro vitsivitsy, nahita sary marobe aho ary dia tsy vitako ny namantatra ny tanàna izay nipetrahako.
Samy zakain'ny lafiny roa ny tsy fisiana fifandraisana. Lazain'ireo havana fa tsy mahalala mihitsy izay mitranga any ivelany ireo mponina ao an-tanàna. Uliana Tokarieva, talen'ny Fikambanana tsy miankina iray, izay manana havana sy namana ao an-tanàna, niteny tamiko hoe : “tsy mahalala na inona na inona izy ireo – na hisy na tsia ny famoahana, ahoana no hahalalan'izy ireo, aiza no hivondrona, raha azo antoka, inona no mitranga any ivelan'ny tanàna, raha mbola Okraina ihany.”
Nandritra ny andro maromaro nifanesy, nambarany fa hisy lalantsara nohony maha-olona hapetraka ao anaty sy ivelan'ny tanàna mba hahafahan'ny fanampiana miditra ary hahafahan'ny mponina miala.
Saingy, araka ny nolazain‘ny Filohan'i Okraina, Volodymyr Zelensky, tamin'ny CNN tamin'ny 10 Martsa :
Nanomboka fanafihana tamin'ny fiara mifono vy ireo mpanani-bohitra, teo amin'ilay faritra izay tokony hisy an'io lalantsara io mihitsy. […]
Androany, nopotehan'izy ireo ny Tranoben'ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny Vonjy Taitra, ao amin'ny faritr'i Donetsk. Tena teo ankilan'io trano io no nisy ny toerana izay tokony nivondronan'ireo mponin'i Mariupol mba ho alefa hivoaka.
Nandritra ny fihaonana mivantana niarahana tamin'ny minisitra Okraniana toa azy tamin'ny 10 Martsa, niezaka nanamarina ny fanafihana natao tamin'ny hopitaly fiterahana sy ny hopitalin'ny ankizy tao Mariupol ny minisitry ny Raharahambahiny rosiàna, Sergei Lavrov. Nanambara izy fa efa nampitandrina tao amin'ny ONU i Rosia andro vitsivitsy talohan'io fa ny hopitaly dia “efa ela no nampiasain'ny andian-tafika Azov sy ireo ‘radicaux’ hafa. Noroahin'izy ireo ny vehivavy amperin'asa, ny mpitsabo mpanampy sy ny mpiasa amin'ny ankapobeny.” Nanampy izy fa : “Tsy vao voalohany izao no nahitanay fitarainana mampalahelo mikasika an'ireo lazaina fa habibiana ataon'ny tafika Rosiana.”
Saingy niteny tamiko i Ivan Sinepalov, mpanao gazety Okraniana hoe: “ampiasaina ho tsangan'olona fampitahorana fotsiny amin'ny fampielezan-kevitra Rosiana ny rezimanta Azov. Ireo mpihaino kendreny, ao Rosia, dia mino fa rakotra Azov i Mariupol.
Nanampy izy hoe: “Nanambara i Lavrov fa hotohizan'i Rosia ny fanjeràna baomba an'i Mariupol raha tsy mamaly an'ireo fangatahan'[i Rosia] i Okraina. Raha fehezina, ataon-dry zareo takalon'aina ny tanàna iray manontolo. Ao an-tsain'izy ireo, Mariupol dia tanàna mpanara-dia an'i Rosia. Tokony ho voninkazo no nandraisan'ireo olompirenena ny miaramila Rosiana. Valifaty izany.”
For more information about this topic, see our special coverage Russia invades Ukraine. …..Raha mila fanazavana fanampiny mikasika ity lohahevitra ity, jereo ny fandrakofanay manokana
Rosia manani-bohitra ao Okraina.